Ma Sidanaa U Danbaysay? Jamaahiirta Man United Oo Ku Maadsaday Alexis Sanchez Iyo Arinta Loo Adeegsaday Oo Murugo Ku Abuuraysa Xidigan. - GOOL24.NET
Ma Sidanaa U Danbaysay? Jamaahiirta Man United Oo Ku Maadsaday Alexis Sanchez Iyo Arinta Loo Adeegsaday Oo Murugo Ku Abuuraysa Xidigan.
Jamaahiirta kooxda Manchester United ayaa qaab bahdilaad ah ugu maad saday xidiga kooxdooda ku dhibtoonaya ee Alexis Sanchez kaas oo tan iyo maalintii uu Old Trafford soo gaadhay awoodi kari waayay in uu dib u soo ceshado qaab ciyaareedkii cajiibka ahaa ee uu Arsenal ku soo bandhigay.
Jamaahiirta Manchester United ayaa maada Alexis Sanchez u adeegsaday ciyaartoy da’yar ah oo 16 sano jir ah kaas oo ay United la soo saxiixatay waxaana qaab bahdilaad ah layskugu xidhay heshiiskan iyo waliba Alexis Sanchez kaas oo hadda u muuqda in aanu mustaqbal ku lahayn United.
Da’yarka aadka loo qiimeeyo ee Noam Emeran ayay Man United kala soo wareegtay kooxda reer France ee Amiens wuxuuna bartiisa Instagram soo dhigay sawirka maaliyada Manchester United oo No.7 oo sare u hayo laakiin sawirkan ayaa noqday mid ay taageerayaasha United ugu bahdileen Alexis Sanchez.
Noam Emeran oo 16 sano jir ah ayaa fariinta uu Instragram soo dhigay waxa uu farxad wayn iyo sharaf ku tilmaamay in uu u saxiixay kooxda Manchester United wuxuuna u mahad celiyay waalidkiisa laakiin jamaahiirta United ayaaba aaminsan in si toos ah kooxda kowaad loogu soo daro si uu booska Sanchez u buuxiyo.
Aan dhawr fariimood ka soo qaadano bahdilaadii taageerayaasha Man United ee Sanchez ay ugula kaceen heshiiska 16 sano jirka Noam Emeran.
Fariinta sare ayuu taageeraha Man United ahi isaga oo isbarbar dhigaya da’yarkan iyo Alexis Sanchez waxa uu soo qoray: “Miyuu isagu in uun fiican yahay? haddii uu fiican yahay, kadib waxa uu si toos ah u tagi karaa kooxda kowaad si uu u badalo Sanchez”.
Sawirka sare fariinta ku qoran ayuu taageere kale ku sheegay in la xaqiijiyay bixitaanka Sanchez maadaama oo No.7 kiisii la asiiyay Noam wuxuuna soo qoray: “Bixitaanka Sanchez waa la xaqiijiyay haddii Noam uu helay lamar 7aad? Waan rajaynayaa”.
Taageeraha kale ayaa sawirka sare soo raaciyay: ” Waad ogtahay in isagu uu ka fiican yahay Sanchez sax?”. Taageere kale ayaa isna soo qoray: “Ayaa doonaya in uu u sheego Sanchez in uu lambarkiisii kooxda lumiyay
Fariimahan iyo kuwo kale ayaa muujiyay sida ay jamaahiirta kooxda Manchester United hadda uga niyad jabeen Sanchez isla markaana ay u arkaan mid aan faa’iido u lahayn kooxooda wuxuuna xidiga reer Chile marayaa ciqaabtii ugu xumayd waayihiisa ciyaareed.